Wararka - Qalabka cabbiraadda degdegga ah ee nafaqada leh
Waxaan wada ognahay in koritaanka dalaggu u baahan yahay biyo iyo nafaqooyin. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin biyaha iyo nafaqooyinka ku jira carrada ayaa saameeya koritaanka dhirta. Marka nafaqooyinka carradu aad u sarreeyaan, waxay sameysmayaan xad-dhaafka nafaqooyinka dhirta, taasoo keeneysa kordhinta nafaqooyinka ciidda iyo sameynta wasakhda ciidda. Marka nafaqooyinka carrada ay aad u hooseeyaan, ma gaari doonaan nuxurka nafaqada ee looga baahan yahay koritaanka dhirta, taasoo saameyn ku yeelata koritaanka caadiga ah ee dhirta, Sidaa darteed, nafaqooyinka ciidda ku habboon oo keliya ayaa ku habboon koritaanka dhirta.
Bacriminta caqliga leh waxay si wax ku ool ah u horumarin kartaa qiimaha wax soo saarka dalagyada waxayna yareyn kartaa isticmaalka bacriminta si wadajir ah. Qalabka cabbiraadda degdegga ah ee nafaqada leh waa aalad tijaabo xirfadeed ah, oo si dhakhso leh u ogaan karta xaddiga bacriminta oo naga caawinaysa inaan si macquul ah u dalbanno bacriminta. Dooddu waxay muujineysaa in quudinta guryaha ay sahleyso isu soo uruurinta digada, iyo digada daaqa ayaa ah kaliya shan meelood meel digada guryaha quudisa, marka quudinta guryaha ayaa kafiican, Daaqa dabiiciga ahna waa in lahorumariyo.
Codsiga qalabka cabbiraadda degdegga ah ee nafaqada leh wuxuu xaqiijin karaa fikradda sayniska ee lagu cabirayo ciidda iyo bacriminta. Sidaa darteed, cabirka carrada iyo bacriminta ayaa ah in la yareeyo miisaanka lana kordhiyo waxtarka. Tallaabada ugu horreysa ee si macquul ah loogu adeegsado bacriminta waa in la cabbiro carrada, cabbirka ciidda ee saxda ahna aad ayuu muhiim u yahay. Haddii cabirka aqbasho ee qalab aan sax ahayn la isticmaalo, kaliya ma ahan saameynta wax soo saar kordheysa lama gaari karo, laakiin sidoo kale natiijada yareynta wax soosaarka waxaa sababi kara dalab macquul ah oo bacrimin ah, Qalabka waa qalab xirfadle ah oo si gaar ah loogu isticmaalo in lagu go'aamiyo nafaqooyinka carrada , iyadoo la adeegsanayo qalabka ayaa faa'iido u leh helitaanka macluumaadka ciidda, si loo helo aasaas muhiim u ah bacriminta sayniska.
Adeegsiga qalabka cabbiraadda degdegga ah ee nafaqada si loo ogaado nafaqooyinka ciidda ayaa siin kara aasaas cilmiyeed badan oo beeralayda ah si ay u fuliyaan arjiga bacriminta, hagaajinta heerka isticmaalka bacriminta, yareeynta dalabka bacriminta iyo qiimaha wax soo saarka beeraha, hagaajinta doorka guryaha ciidda, soo celinta tayada beeraha dhulka, lana yareeyo wasakheynta wax soo saarka beeraha, Waxay door aad u weyn ka ciyaareysaa hagaajinta qiimaha waxsoosaarka iyo tayada dalagyada iyo ilaalinta deegaanka bey'adeed ee beeraha.